Mommra mma yɛnto dwom wɔ anigyeɛ so mma Awurade;
momma yɛmmɔ ose mma yɛn nkwagyeɛ Botan no.
na yɛmfa ahosɛpɛ nnwom mma no so.
Ɛfiri sɛ, Awurade yɛ Onyankopɔn kɛseɛ,
ɔhenkɛseɛ wɔ anyame nyinaa so.
na mmepɔ mpampam wɔ no.
Ɛpo wɔ no. Ɔno na ɔbɔeɛ,
na ne nsa na ɛnwonoo asase kesee no.
Mommra mma yɛnkoto nsom no.
Momma yɛmmu nkotodwe wɔ Awurade yɛn Yɛfoɔ no anim!
Ɔyɛ yɛn Onyankopɔn;
yɛyɛ nʼadidibea nnipa,
ne nnwankuo a ɔhwɛ wɔn so.
Ɛnnɛ, sɛ mote ne nne a,